Taurine - kuyini? Yilokhu sizokutshela esihlokweni samanje. Uyofunda ngalokho izidakamizwa ukufaka ketshezi wathi kusukela abelwe kuwo nalokho izakhiwo banayo.
Taurine - lokho oyikho nalokho izici it has? Ngokusho kochwepheshe, yalolu ketshezi kuyinto sulfonic acid, kwakheka okuyinto emzimbeni womuntu kusuka cysteine.
Taurine uvame ukubizwa ngokuthi sulphur-aqukethe amino acid. Kufanele kuqashelwe ukuthi i-molecule ye akukho qembu carboxyl. Izinto eziningi ezincane ke elikhona Bile nezicubu bezilwane nabantu.
Taurine - kuyini? Le into liyasetshenziswa ibhekwa njengengxenye yokudla okunempilo (e Badakhshan) njengoba futhi njengoba izidakamizwa (osebenza njengokuvimbelayo isakhi esiyinhloko e amalungiselelo amaningi). igama Its livela egameni lesi Latin ezifana taurus, okusho "inkunzi". taurine Okokuqala kususelwe Bile sezinkomo e 1827 ososayensi German ezifana Leopold Gmelin futhi Friedrich Tiedemann.
Ukwakheka, emabhokisini ifomu izidakamizwa
Manje uyazi impendulo yombuzo othi: "? Taurine - kuyini" Njengoba kushiwo ngenhla, ketshezi wathi ngokuvamile sisetshenziswa womshini nemithi ehlukahlukene.
Ethandwa kakhulu phakathi iziguli zisebenzisa ngeso lehla "Taurine". Ukusebenzisa kwabo kuvezwa izifo ezihlukahlukene izitho ezibukwayo.
Njengoba kungenzeka uye ukuyichaza, isithako esebenzayo zomuthi kuyinto taurine. Ngaphandle-ke ku amaconsi kuhlanganisa enjalo izinto ezengeziwe njengoba amanzi methyl parahydroxybenzoate.
Drops "Taurine" imfundo okuyinto ebiyelwe a emaphaketheni amakhadibhodi akhiqizwa ngepulasitiki weThrojani isitsha.
Uyini izidakamizwa "Taurine"? Ukusetshenziswa kwalesi izidakamizwa kuboniswe ikakhulukazi umkhuba amehlo. Ngokusho kwemibiko ngochwepheshe, kuba umshadisi ogunyazwe umzimba, okuyinto esetshenziswa ukuthuthukisa inqubo yokutakula.
A imithi senzelwe izitho obonayo, ngempumelelo kuzibonakalisa hhayi kuphela imithi womuntu, kodwa futhi ekwelapheni nezezilwane ezifuywayo, ikakhulukazi amakati.
Lokhu ukulungiselela iqukethe engabalulekile acid acid kusilela okuyinto enomthelela zenhliziyo kanye ukonakala ngwengwzi.
Taurine nombolo ayisetshenziselwa kuphela ukudalwa iso amaconsi, kodwa futhi womshini izixazululo nemijovo, amaphilisi kanye ngisho amaphilisi.
ketshezi has retinoprotektornoe, nezinye umphumela anti-umzimba ekuphathweni subconjunctival. Lapho uhlelo libhekene ukusetshenziswa izakhiwo antihypertensive, cardiotonic futhi hepatoprotective.
Ephambi kwezinduna ukuhluleka inhliziyo ezingamahlalakhona imvelo taurine uyakwazi ukunciphisa ububi besimo sokuguquka yokujama tsi ayesekhona esikhulu yamaphaphu. Futhi, kwandisa esivimba amanzi contractility futhi kunciphisa diastolic ingcindezi intracardiac.
Kumele kuqashelwe futhi ukuthi "Taurine" amaphilisi kanye amaphilisi kusiza ukuphungula wegazi nomfutho wegazi ophezulu. Ngo inqubo yokuthola ukunciphisa okuphawulekayo izimpawu ukweqisa izidakamizwa -calcium channel blocker , kanye glycosides inhliziyo. Futhi, iziguli ngcono ukukhuthazela ngokomzimba.
Ngo sikashukela igazi glucose kwehle ezingu-15 ngemuva Ukuqalwa yokwelapha. Futhi, kukhona ukwehla kwamazinga triglyceride.
Ngo eside ukwelashwa "Taurine" kakhulu ngcono microcirculation we conjunctiva. Futhi khona izifo ngokukhukhumala kwentamo sesibindi esingelapheki kubantu abangamaphesenti isiguli ukuba umzimba evamile, kukhuphuke ukugeleza kwegazi futhi kunciphise kobukhulu cytolysis hepatic.
Okubizela lesi sidakamizwa "Taurine"? Yokusetshenziswa (lehla iziguli ngokuvamile ezisetshenziswa ngeso) uthi ngokuvamile isidakamizwa ezinqunyiwe sokuwohloka corneal, izilonda esiwohlozayo-retina, cataract futhi ukulimala corneal.
Njengoba kwezokuphatha temlomo, kusekelwe taurine izidakamizwa ngokuvamile sisetshenziswa isifo senhliziyo, ubuthi, glycosides kwenhliziyo futhi ngifundise ngesifo sikashukela.
Taurine is hhayi Kunconywa ukuba isetshenziswe uma hypersensitivity. Futhi amalungiselelo kwezindlu kusekelwe kuyo kungukuthi iqondiswa ebuntwaneni.
Eye lehla "Taurine": yokusetshenziswa
Drops "Taurine" kufanele sisetshenziselwe owawudalelwe injongo onguchwepheshe. Lokhu kungenxa yokuthi isicelo yayo wesifunda kungaba ezahlukene kuye ngokuthi isifo ekhona.
Ukuze ekwelapheni cataract izidakamizwa isetshenziswa ngendlela instillations e isamba 1-2 sehla izikhathi 2-4 nsuku zonke. Inkambo lokhu kwelashwa kufanele kuhlale 3 izinyanga. Uma kudingeka, kungase kudingeke uphindaphindwe ngemva kwamasonto 4.
Uma kwenzeka yokulimala noma ukonakala kwazo amathonsi cornea kufanele wayisebenzisa ngenyanga. Endabeni izifo esiwohlozayo retina futhi engena corneal isilonda ikhambi isetshenziswa ngendlela umjovo subconjunctival.
isixazululo 4% ngo isamba 0.3 ml iqondiswa kanye ngosuku izinsuku eziyi-10. Ngemva kwezinyanga 7-8 ukwelashwa kufanele liphindwe.
Ngokuqondene yetemlomo zomuthi, umthamo yayo kufanele kukhethwe kuphela udokotela.
"Taurine" amaphilisi noma amaphilisi ibhekwa wezokudla njengoba esithathwayo esiswini esingenalutho kathathu ngosuku. Ngo ukuhluleka kwenhliziyo, izifo zesibindi noma isifo sikashukela izidakamizwa yaphathwa esilinganayo kanye nobuningi efanayo. Nokho, isikhathi sokwelashwa leli thuluzi kuyahluka kakhulu. Ngo senhliziyo, isifo sesibindi kanye amaphilisi inyanga eyodwa, futhi sikashukela - nakuba kungaze kube yinxenye ngonyaka.
Uma usebenzisa amathonsi iso, isiguli singase ukuthuthukisa ukusabela iguliswa wendawo. Ngokuphathelene izinhlobo ngomlomo izidakamizwa, benza kungabangela izinkinga nge operation esiswini.
Mayelana ngeso lehla "Taurine" ashiye okubuyayo kuphela. Iziguli zithi izidakamizwa ngempumelelo kuzibonakalisa kuba nenkinga nge izinhlaka umbono.
Izibuyekezo ezingezinhle ngalokhu imithi ezingajwayelekile kakhulu. Njengomthetho, zihlotshaniswa ukusabela ezingezinhle ezenzeka lapho ukhona hypersensitive emuthini. Kulokhu, kungcono senqabe kusuka.
Kufanele kuphawulwe ukuthi iziguli eziningi ukuthatha imithi ngesisekelo taurine ngaphakathi njengoba amagciwane. Ngokusho izimpendulo zabo, indlela yokuthola kubhekwa ama-amino acid okukhuthazela zomzimba womuntu. Ngakho-ke, Izithako zokudla esekelwe taurine athandwa kakhulu phakathi abadlali professional.
Yini "Djufaston"? "Djufaston" - izidakamizwa hormone. Tablets "Djufaston"
University Russian Obungane Abantu '. Abantu 'Ubungane University: uhlu amandla kanye nokubuyekeza umfundi